Dhageyso: Waxgaradka Iyo Siyaasiyiinta Ku Nool Kismaayo Oo Ka Soo Horjeestay Weerarada Dowladda – Goobjoog News
Siyaasi Maxamed Xasan Nuur oo horay u soo noqday guddoomiyihii hore ee degmada kismaayo iyo Nabadoon Barre Salaad Axmed ayaa waxay ugu baaqeen dowladda Fedaraalka Soomaaliya in ay joojiso siyaasiyiinta ay guryahooda ku weerareyso.
Siyaasi Nuur ayaa tilmaamay in lagama maarmaan ay tahay in dowladda Fedaraalka Soomaaliya ay ka fiirsato marka ay qaadeyso howlgallo ceynkaan oo kale ah.
Mar uu arrintaasi ka hadlayay waxaa uu yiri “ Aaad iyo aad ayaan uga xunnahay waxaa ay sameyneyso dowladda, waxaan arabnaa in dowladda ay naga qanciso oo ay jawaab naga siiso, haddeysan jawaab naga siinin waxaan u sheegeynaa in kalsoonidii aan kala laabadan doonno “.
Horaantii todobaadkan ayay aheyd markii Maxamed Curmar Geedi oo soo noqday wasiir ku xigeen ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku weerareen hooy uu ka deganaa gurigiisa oo ku yaalla Magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada hoose.
Waxgaradka Gobolka Mudug Oo Ka Hadlay Suurtagalnimada Dhismaha Dekadda Garacad